Haven: shandura yako yekare smartphone kuti ive mudziyo wekutarisa | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Zvimwe Linux, Zvirongwa
Haven, Sezvaunenge uchitoziva, ndicho chikumbiro chakakurumbira chakaiswa naEduard Snowden uye chakagadzirwa neGuardian Project mukubatana neFree Press Foundation. Iyo app ndeye yakavhurwa sosi, yemahara zvachose, asi ndozvakaitawo maraibhurari ayo ave achishandiswa kugadzira chirongwa ichi. Unogona kuona kodhi yekodhi kubva papeji rauinaro GitHub kana iwe uchifarira, asi zvinokwanisika kurodha pasi zvakananga kubva ku Google Play Store pane yako Android piritsi kana smartphone, sezvo iyo Haven app yaburitswa munguva yayo yeBeta mune yakanzi application chitoro kuitira kuti isu tese tifare.
Iyi purojekiti yeFOSS, iyo parizvino isingadhure kana sendi, sezvo iripo yekurodha mahara, inogona kushandura yedu Android mudziyo mune yakazara chengetedzo yakaoma kutora mukana weiyo Hardware yeyedu kifaa kuita mabasa ekutarisa. Chese chinhu chinounganidzwa chinochengetwa munharaunda, pasina mishumo isingawanzo yeruzivo kune vechitatu mapato sezvakataurwa nevakaigadzira. Uye nderudzii rweruzivo rwunonyora, zvakanaka, ndizvo zvinotevera:
Accelerometer: Unogona kushandisa sensor yedu yedhijitori kuti utore kufamba uye kudedera.
Kamera: inoona kufamba kwakatorwa nekamberi uye kumberi makamera.
Microphone: inoshandura kuita ruzha detector uye inodzinyora.
Chiedza chemwenje: mune ino kesi ichaona shanduko mune ambient mwenje.
Power system: inozoona kana chishandiso chakabatana kana chiteshi chemagetsi.
Uye zvese izvo zvechii? Huye, iyo Haven app icha shandura mudziyo wedu kuita yakanaka "yekutarisa chiteshi" kuchengetedza nzvimbo dzedu pachedu tisingakanganise zvakavanzika zvedu, tichiongorora nharaunda yedu uye tichinyora data munzvimbo imomo sezvandataura, nekunyorera, uye tichikwanisa kuzivisa kana zvikaitika. Naizvozvo, zvakanakisa kukumikidza chinyakare chishandiso chatisingacha shandise icho chete ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Haven: shandura yako yekare smartphone kuti ive mudziyo wekutarisa
Inonakidza kwazvo, inogona kubatsira zvikuru